Mayelana ne-akhawunti entsha yasebhange
Sicela wazi ngomusa njengoba i-akhawunti yethu yangaphambilini iqandisiwe ngenxa yenkokhelo evela e-Arbitration Area, sizosebenzisa i-akhawunti elandelayo kusukela manje kuqhubeke: Ibhange: I-BANK OF CHINA HEBEI YUDONG SUB BRANCH Ikheli Lasebhange: NO 78 JIANHUA SOUTH STREET, SHIJIAZHUANG HEBEI CHINA Akhawunti No .: 100480927210 SWIFT: BKCH ...
Lapho kusebenza khona ivalvevevemvane?
Amaphayiphu e-Butterfly afanele amapayipi athutha imithombo yezindaba ewuketshezi engonakalisi nezinhlobonhlobo ezinhlelweni zobunjiniyela njengama-generator, igesi yamalahle, igesi yemvelo, umoya obandayo noshisayo, ukuncibilika kwamakhemikhali nokukhiqizwa kwamandla nokuvikelwa kwemvelo, futhi kusetshenziselwa ukulawulwa kanye ne-interce. ..
Okokuqala, Ucezu lokuvalwa luyawa futhi lubangele ukuvuza Isizathu: 1. Ukusebenza kabi kwenza ingxenye yokuvala ibhajwe noma yeqe isikhungo esiphezulu esifile, futhi ukuxhumana kulimele futhi kwephukile; 2. Ingxenye yokuvala ayixhunyiwe ngokuqinile, ayithukululwa futhi iyawa; 3. Okokusebenza kwezingxenye ezixhuma ...
Uyini umehluko phakathi kwe-globe valve ne-valve yesango?
Amagilavu ​​eglobe, ama-valve esango, amaveluvemvane, ama-valve wokuhlola namaphayiphu ebhola, njll. Lawa ma-valve manje asezingxenye zokulawula ezibalulekile ezinhlelweni ezahlukahlukene zamapayipi. Uhlobo ngalunye lwe-valve luhlukile ngokubukeka, ukwakheka kanye nenjongo yokusebenza. Kodwa-ke, i-valve yokumisa kanye ne-valve yesango inakho ...
Engagqwali Isango Valve, I-Angle Globe Valve, I-Valve Yesango Lamanzi, Engagqwali Ball Valve, Trunnion Ibhola Valve, I-Sluice Gate Valve,